प्रचण्ड ओलीलाईसँगै भात खुवाएका मेडिकल सञ्चालक प्रसाईले भने : पटक-पटक अनसन बस्नेलाई सरकारले मर्न दिनुपर्छ…(भिडियोसहित) — SuchanaKendra.Com
प्रचण्ड ओलीलाईसँगै भात खुवाएका मेडिकल सञ्चालक प्रसाईले भने : पटक-पटक अनसन बस्नेलाई सरकारले मर्न दिनुपर्छ…(भिडियोसहित)
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७४/११/२५ गते
काठमाडौँ, : केहि हप्ता अगाडी प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच निजी निवासमा भएको गोप्य वार्ता सँगै खाना खाने समयमा ओली र प्रचण्डसँगै अर्का एक व्यक्तिको फोटो सार्वजानिक भयो।ती अर्का व्यक्ति थिए माओवादी कार्यकर्ता तथा बिएन्डसी शिक्षण अस्पताल झापाका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं। प्रसाईंकै निवासमा उक्त गोप्य वार्ता भएको थियो।सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा उक्त फोटो सार्वजानिक भएपछि मानिसहरुले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरे।
सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा कार्यक्रम प्रस्तोता जिवराम भण्डारीसँग कुराकानी गर्दै दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना बाबुको मामाको छोरा र प्रचण्ड आफ्नो आदर्श पुरुष र आफू उनको भक्त भएको बताए।
डा.गोविन्द केसीले सामाजिक संजाल फेसबुक,ट्वीटर र पत्रकार सबैलाई बेबकुफ बनाएका छन्।पत्रकार र मिडियाहरुले केसीलाई जबर्जस्ती हिरो बनाइदिएका र आफू जस्तो राम्रो काम गर्ने मानिसलाई गुण्डा,डन,माफिया बनाईदिएको प्रसाईंको भनाई छ। मैले राज्यलाई १३ करोड कर बुझाए,त्यो पैसा मैले चोरेर ल्याएको र कालो धन होइन।प्रसाईंको भनाई छ।
आफ्नो घरमा ओली र प्रचण्ड गएर वार्ता गरेर खाना खाएको कुरालाई लिएर नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गलत टिप्पणी गरेकोमा आक्रोसित हुँदै प्रसाईंले प्रश्न सोधे- ‘बाबुरामको बुद्धि र विवेकलाई म मान्दिन,बाबुरामकै नेतृत्वमा बिसौं हजार मानिस मारिए। म पनि जनयुद्धमा सामेल थिए।बाबुराम प्रधानमन्त्री भए तर उनले देश र पार्टीलाई कहाँ पुराए ? बाबुरामले जनयुद्ध व्यपारीकै पैसाले लडेका थिए। आज आफ्नो घरको वरिपरि सेना राखेर व्यापारीको पैसाले खाना खाएर बसेका छन्। यो देशमा बाबुरामको योगदान के छ ? देशको हालत कस्तो बनाइदिए ? यो देशमा हामीले जस्तो काम गर्नुपर्छ।’
एक-दुई जना मान्छेलाई मर्न दिदा केहि हुँदैन मर्न दिउँ,केहि बिग्रिदैन,राज्य क्रुर भएर चल्नुपर्छ। प्रसाईंले डा.केसीको अनसनलाई लक्षित गर्दै बताए। एउटै मान्छेले फेसबुक,ट्वीटर,रेडियो,टेलिभिजन,पत्रिका धेरै चलाएर यो देश बिग्रियो।सरकारले यी सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिलाई यी सबै कुरा चलाउन दिनु भएन।
हामी पार्टी चलाउनेका सन्तान होउँ।हाम्रो प्रसाईं परिवार दानवीर छन् । डा.गोविन्द केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हेरिराखेका छन्।केसीलाई टिचिंग अस्पतालबाट निकालेर फाल्न प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीलाई सुझाव दिए। हेर्नुहोस् प्रसाईंसँगको कुराकानी